Ungangena kanjani ngemvume kwi-Word: Izindlela ezi-3 ezisebenzayo? | Iforamu yeselula
UJose Albert | 20/06/2022 20:19 | Microsoft Word, Ukushintshwa kwehhovisi
Phakathi kwe imikhuba emihle yokuphepha kwekhompyutha, bengilokhu ngidinga, ngakolunye uhlangothi, izici nezinyathelo zobumfihlo nokungaziwa. Nakuba, ngakolunye uhlangothi, bakhuthaza ukusetshenziswa izindlela zokuqinisekisa, zokuqinisekisa kanye nokuhlonza. Ngaphezu kwakho konke, uma kuziwa ekuphathweni kwemibhalo yomuntu siqu, yomsebenzi kanye nesemthethweni. Ngalesi sizathu, cishe kuzo zonke izinhlelo zokusebenza zezinketho ezijwayelekile ze-Office Suites zifakiwe noma kukhona amaqhinga, ukuze ukwazi ukusebenzisa amasignesha edijithali. Futhi namuhla, sizobhekana kanjani «ngena ngemvume».
Sicela uqaphele ukuthi ukusetshenziswa kwamasignesha abhalwe ngesandla edijithali kanye amasiginesha edijithali (eyaziwa nangokuthi i-digital identification), iyindlela engasetshenziswa futhi okufanele, ngokusemandleni akho, isetshenziswe kukho kokubili I-Microsoft Office okuvamile (IZwi, i-Excel ne-PowerPoint), njengabaningi Office Suites ekhona, isibonelo, LibreOffice. Ukuze uqinisekise a izinga eliphezulu lokufaneleka kuzo.
Futhi, ngaphambi kokuqala isihloko sanamuhla, mayelana I-MS Word processor kanye nemisebenzi yayo ehlukahlukene, ikakhulukazi ukuthi kanjani «ngena ngemvume». Sincoma ezinye zethu okuthunyelwe kwangaphambilini okuhlobene ngesicelo esishiwo I-Microsoft Office:
Indlela yokwenza uhlelo nge-Word: isinyathelo ngesinyathelo
1 Ngena ngemvume nge-Word: Yenza kube ngokwakho futhi uqinisekise amadokhumenti
1.1 Kungani usayine idokhumenti ngedijithali?
1.2 Izindlela ezi-3 ezisebenzayo zokungena ngemvume ku-Word
1.2.1 Indlela ye-1
1.2.2 Indlela ye-2
1.2.3 Indlela ye-3
Ngena ngemvume nge-Word: Yenza kube ngokwakho futhi uqinisekise amadokhumenti
Kungani usayine idokhumenti ngedijithali?
Ukusetshenziswa kwe amasignesha abhalwe ngesandla edijithali ngokuvamile inikeza idokhumenti enkulu ukuthinta komuntu siqu. Ngakho-ke, ukufaka idijithali isiginesha yethu ebhalwe ngesandla bese uyigcina njengesithombe ukuze usifake kumadokhumenti adingekayo noma adingekayo kungenza umehluko omuhle kuhlelo lwakho lokusebenza. ukwamukelwa ngabantu besithathu.
Ngenkathi ukusetshenziswa kwe isiginesha yedijithali inyusa izinga lokuvikeleka nokuba yiqiniso kwamadokhumentingoba lokhu a uphawu lokuqinisekisa nge-elekthronikhi olubethelwe ngefomethi yedijithali. Kuwusizo kakhulu, ikakhulukazi, ukufaka imiyalezo ye-imeyili noma imibhalo ye-elekthronikhi. Ngoba isiginesha yedijithali kufanele iqinisekise ukuthi ulwazi luvela kumsayini futhi alulungiswanga.
Ngakho-ke, ngezinga elincane noma elikhulu, zombili izindlela zokusayina imibhalo zinikeza iziqinisekiso ze:
Izindlela ezi-3 ezisebenzayo zokungena ngemvume ku-Word
Okwamanje, ku- Isicelo sehhovisi le-MS Word okulandelayo kungasetshenziswa Izindlela ezi-3 ezisebenzayo ukuzuza umphumela wesiginesha owamukelekile. Futhi lokhu okulandelayo:
Dweba isiginesha mathupha ephepheni bese uyiskena efayeleni lesithombe (jpg, png noma ezinye). Noma uma wehluleka, yidwebe ngedijithali usebenzisa noma yiluphi uhlelo lokusebenza lomdwebo, olufana ne-MS Paint.
Vula uhlelo lokusebenza lwe-MS Word, chofoza inkinobho ethi "Faka"> "Isithombe" ukuze ukhethe ifayela lesithombe elidaliwe elizoqukatha isiginesha.
Bhala umbhalo esizowengeza kusiginesha, bese ukhetha kokubili. Sizobe sesidinga ukukhetha igalari Yezingxenye Ezisheshayo ukuze silondoloze futhi sisebenzise leyo sethi ekhiqiziwe esikhathini esithile esizayo.
Njengoba kuboniswe ngezansi:
Indlela yesibili, engaphezu kokusayina, iwukwakha idokhumenti enezikhala ezifanele zaleyo njongo. Le ndlela, ngaphezu kwakho konke, iwusizo uma idokhumenti kufanele ithunyelwe ukuze isayinwe ngumuntu oyedwa noma ngaphezulu mathupha. Futhi le ndlela ifakiwe ku Microsoft Word ibizwa, Umugqa wesiginesha we-Microsoft Office.
Okungukuthi, le ndlela inikeza inketho faka ulayini wesiginesha owodwa noma ngaphezulu, ukuze kuqinisekiswe ukuthi idokhumenti ihlala ihlelwe kahle nokuthi isiginesha inesikhala esidingekayo.
Ukuze wenze le ndlela, yenza okulandelayo:
Vula idokhumenti ngesikhathi sokulungiswa noma sokuqedwa kakade, ukuze uqhubeke nokuguqulwa kwayo.
Misa ikhesa yegundane (igundane) endaweni lapho sifuna ukuthi umugqa wesiginesha ufakwe ukuze uvele.
Hamba bese uchofoza inketho (isithonjana) sokuthi "Faka -> Ulayini Wesiginesha we-Microsoft Office".
Gcwalisa izinkambu eziceliwe efasiteleni elithi “Ukulungiselela Isiginesha” bese uqedela ngokucindezela inkinobho ethi “Yamukela”.
Uma konke lokhu sekwenziwe, umugqa wesiginesha ungavezwa endaweni yombhalo obonisiwe. Ukuze kunyatheliswe futhi kusayinwe idokhumenti. Nakuba, ungakwazi futhi ukufaka isiginesha ebhalwe ngesandla edijithali endaweni yomugqa wesiginesha, njengoba sichazile endleleni yokuqala. Noma ngaphezulu kalula, njengoba sizochaza ngendlela yesithathu.
Uma kwenzeka ufuna ukungena ujule Ukusebenzisa isici se-Microsoft Office Signature Line, sincoma ukuthi uhlole eyethu okuthunyelwe kwangaphambilini okuhlobene.
Ekugcineni, elula, eqondile kakhulu futhi enengqondo kuzo zonke izindlela, kuwukusebenzisa nje ifayela lesithombe elinesiginesha ebhalwe ngesandla edijithali, njengasendleleni yokuqala, bese ulifaka njengesithombe esilula, endaweni edingekayo kudokhumenti.
Ekugcineni, uma ufuna ukuhlola ulwazi olusemthethweni mayelana "nokungena ngemvume ku-Word", sincoma ukuthi uchofoze okulandelayo isixhumanisi.
Ngamafuphi, njengoba kungabonakala, «ngena ngemvume» kwimodi yedijithali kulula kakhulu futhi kungaba usizo kakhulu, ukumane ukwenze kube ngokwakho noma ukukuhlobisa, ikhava a imfuneko engokomthetho. Njengoba, njengoba sishilo ekuqaleni, ukusayina idokhumenti kungaqinisekisa ubuqiniso, ukuqinisekiswa kanye nokuhlonza okufanayo, ngokuqinisekisa ukuthi umuntu osayinile ukuqondisisile okuqukethwe futhi unikeza imvume yakhe, phakathi kwezinye izinto.
Ngakho, manje ukwazi lezi Izindlela ezi-3 ezisebenzayo, uzokwazi ukufeza le nhloso ngempumelelo.
Indlela ephelele ye-athikili: Iforamu Yeselula » Ukushintshwa kwehhovisi » Indlela yokungena ngemvume kwi-Word: Izindlela ezi-3 ezisebenzayo
I-TV yami ayingitsheli lutho: yini okumele ngenze ukuyilungisa?
Ama-emulators we-Nintendo 64 angcono kakhulu we-PC